Weerar Ka Dhacay Magaalada Jowhar – Great Banaadir
Weerar Ka Dhacay Magaalada Jowhar
Wararka aan ka heleyno Magaalada Jowhar ee Xarunta Gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxaa ay ku warramayaan in xalay Al-shabaab ay weerar ku qaadeen Saldhig Ciidanka Midowga Afrika ee AMISOM ay ku leeyihiin dhinaca bari ee magaaladaas.
Dad ku sugan Jowhar ayaa sheegay inay saq dhexe maqlayeen dhawaqa madaafiic xoogan iyo rasaas daba socotay, iyadoona ay weerar loo adeegsaday madaafiic ay shabaab ku qaadeen saldhiga ciidamada.
Ciidanka AMSIOM ayaa sidoo kale la sheegay in dhankooda ka Jawaabeen tirro hoobiyeyaal ah oo lagu soo tuuray, in kastoo aan weli la ogeyn khasaaraha ka dhashay madaafiicda la isweydaarsaday, maadaama uu saq dhexe uu weerarku dhacay.
Wararkii ugu dambeeyay ee saakay laga helayo Magaalada Jowhar ee Caasimadda Dowlad Goboleedka Hirshabeelle ayaa waxaa ay sheegayaan in Ciidanka Booliska Maamulka ay howlgal baaritaano ah ka wadaan xaafaddo katirsan magaaladaas.
Howlgalka ayaa ah mid lagu xaqiijinayo amniga magaalada, ilaa iyo haddana lama oga cid lagu soo qabtay howlgalka oo si gaar ah uga socda Xaafadda Horseed ee Jowhar oo ciidamada ay baaritaano ku sameeynayaan goobo bartilmaameed u ah. – Hiiraan Weyn News